Louisiana / USA: Louisiana roondo ayaa lagu eedeeyay inay galmood ku sameysay eey booliis ah, in kabadan 20 oo qof ayaa saxeexday codsi ay ku dalbanayaan in tallaabo sharci ah laga qaado "Kaliya cadaanka reer galbeedka, si kastaba ha ahaatee, ayaa sameyn kara arintaas , sheekooyinka noocan ah "
Sida lagu sheegay war-saxaafadeed lagu daabacay "In Difaaca of Xayawaanka ", Waa urur caalami ah oo ilaaliya xayawaanka, Terry Butman loo qorsheeyay in maxkamad la soo taago Abril 23, 2019. Ururka ayaa raba Butman hela cunaqabatayn ugu badnaan.
Kumanaan Taageerayaal ah Difaaca of Xayawaanka ay ku kaceen falkan naxdinta leh oo doonaya in caddaalad la sameeyo sameeyey, dhawaaqay Doll Stanley, Madaxa Ololaha Difaaca of Xayawaanka.
a bulshada caafimaadka qabta waxay ilaalisaa xaqdarradeeda: carruurta nugul, xoolaha, dadka da'da ah (…) Waa inaan hubinaa in kuwa ugaarsiga galmada ka baqayaa luminta xorriyadda iyo waxyeelada dhaqaale ee ba'an. Waxaan ugu yeernaa qareenka degmada Marvin Schuyler in la qaato booska u dulqaadashada eber iyo in si buuxda loo raaco Butman haddii lagu helo dambi.
Bishii Agoosto 2018, Qeybta Dhibbanayaasha Gaarka ah ee Booliiska Gobolka Louisiana ayaa furay baaritaan la xiriira eedeymaha xadgudubka qalloocan ee Butman. Saraakiisha ayaa helay caddeyn elektiroonig ah oo ku saabsan ficillada falgalka ah ee sarkaalka ciidanka xoogga gudaha, mar la qurxiyey, eey boolis hawlgab ah.
Butman isa soo dhiibay oo waxaa la galiyay xabsiga bilayska ee Xarunta ugu Saxida Asluubta Bossier. Waxaa lagu soo oogay 20 dacwadood oo dambiyo ah, isagoo ku kacay falal galmo ah xayawaan iyo 24 cabashooyin ah oo la xiriira filimaanta falalkaas. Damiintiisa ayaa lagu dejiyay $ 350, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. Bishii Janaayo 27, Yetman wuxuu hor yimid maxkamadda. Qareenkeeda ayaa helay kordhin. Taariikhda maxkamad wali lama cayimin, welina Butman wuxuu wali ku sii jiraa silsiladaha.
Sida lagu sheegay war-saxaafadeedka, xeerka ciqaabta ee Gobolka Louisiana, qodobka 89-aad(Dembiyada Ka Soo Horjeeda Dabeecadda) waxaa lagu ciqaabi karaa dambiga koowaad, ganaax gaaraya ilaa $ 2000 iyo / ama xukun shan sano oo xabsi ah, guuritaan maskaxeed iyo xiriir la’aan xoolaha ugu yaraan shan sano.
Dambiga labaad waxaa lagu ciqaabayaa ganaax ugu badnaan ah $ 25 iyo ugu badnaan xabsi ah 000 sano. Dhamaan maxaa yeelay Reer galbeedka ayaa sameeya raaligelinta sheekooyinka aan dabiiciga ahayn. Maxay ugu jilba joogsadaan xayawaanka ??
Dadka Madowga / Afrikaanka - Taariikhdeena: miyaad garanaysaa waxa loo yaqaan '' allulum ')? "Tusaalooyinka" waa aalad caan ah oo muhiim u ah cudurada dumarka; waxaa abuuray J. Marion Sims, (Janaayo 25, 1813 - Noofambar 13, 1883), misogynist, cunsuri iyo nin rabshad leh, oo loo tixgeliyey inuu yahay aabaha cilmiga dumarka